May 2020 – Dhammadīpa
Posted on 16 May 2020 by Ashin Sopāka
“So too, householder,anoble disciple considers thus: ‘Sensual pleasures have been compared toapiece of meat by the Blessed One; they provide much suffering and much despair, while the danger in them is great.’ Having seen this thus as it actually is with proper wisdomhe avoids the equanimity that is diversified, based on diversity, and develops the equanimity that is unified, based on unity, where clinging to the material things of the world utterly ceases without remainder.” MN 54
သူကြွယ် ဥပမာအားဖြင့် လင်းတသည် လည်းကောင်း၊ ဘုံမတီးငှက်သည် လည်းကောင်း၊ စွန်ရဲသည် လည်းကောင်း သားတစ်ကို ချီ၍ ပျံသွားရာ၏၊ ထိုသားတစ်ကို ချီ၍ ပျံသော ငှက်သို့ လင်းတ တို့သည် လည်းကောင်း၊ ဘုံမတီးငှက်တို့သည် လည်းကောင်း၊ စွန်ရဲတို့သည် လည်းကောင်း အစဉ်တစိုက် လိုက်ကုန် လိုက်ကုန်၍ ထိုးဆိတ်ကြ ကုန်ရာ၏၊ သားတစ်ကို လွှတ်ချ စေကုန်ရာ၏၊ သူကြွယ် ထိုစကား ကို သင် အဘယ်သို့ မှတ်ထင်သနည်း။ အကယ်၍ လင်းတသည် လည်းကောင်း၊ ဘုံမတီးငှက်သည် လည်းကောင်း၊ စွန်ရဲသည် လည်းကောင်း ထိုအစာသားတစ်ကို လျင်စွာသာလျှင် မစွန့်လွှတ် ငြားအံ့၊ ထိုသားတစ်ချီ ယူသော ငှက်သည် ထိုငှက်အပေါင်းတို့က လုယူ ထိုးဆိတ်ကြခြင်းတည်း ဟူသော အကြောင်းကြောင့် သေခြင်းသို့သော် လည်းကောင်း၊ သေလောက်သော ဆင်းရဲသို့ သော်လည်းကောင်း ရောက်ရာသည် မဟုတ်လော ဟု (မေးတော်မူ၏)။ အသျှင်ဘုရား မှန်ပါ၏ ဟု (လျှောက်၏)။
သူကြွယ် ဤအတူ သာလျှင် မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သားသည် ဤသို့ ဆင်ခြင်၏— “ကာမဂုဏ်တို့ သည် သားတစ်နှင့် တူကုန်၏၊ များစွာ ဆင်းရဲခြင်း ရှိကုန်၏၊ များစွာ ပင်ပန်းခြင်း ရှိကုန်၏၊ ဤကာမ ဂုဏ် စည်းစိမ်တို့၌ အပြစ်သည် များပြား လှ၏” ဟု မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားတော် မူ၏၊ ဤသို့ ထိုကာမဂုဏ်တို့ကို ဟုတ်မှန်သည့် အတိုင်း ကောင်းသော ပညာဖြင့် မြင်၍ အထူးထူးသော သဘော ရှိသော အထူးထူးသော သဘောကို မှီသော ဥပေက္ခာမျိုးကို ရှောင်ကြဉ်၍ တစ်ခုတည်းသော သဘော ရှိသော တစ်ခုတည်းသော သဘောကို မှီသော အခါခပ်သိမ်း လောကသားများ တပ်မက်စရာ (ကာမ ဂုဏ်ငါးပါး) တို့ကို စွဲလမ်းခြင်း ‘ဆန္ဒရာဂ’ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ရာ ဖြစ်သော (စတုတ္ထဈာန်) ဥပေက္ခာမျိုးကို သာလျှင် ပွါးများ၏။
—Cũng vậy, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã nói, dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn”. Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhứt chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy.
ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนแร้งก็ดี นกตะกรุมก็ดี เหยี่ยวก็ดี พาชิ้นเนื้อบินไป แร้งทั้งหลาย นกตะกรุมทั้งหลาย หรือเหยี่ยวทั้งหลาย จะพึงโผเข้ารุมจิกแย่งชิ้นเนื้อนั้น ฉันใด ดูกรคฤหบดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ถ้าแร้ง นกตะกรุม หรือเหยี่ยวตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสีย มันจะถึงตายหรือทุกข์ปางตาย เพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุ?
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า กามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เปรียบด้วยชิ้นเนื้อ มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก ในกามนี้มีโทษอย่างยิ่ง ครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆ แล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็นอารมณ์เดียว อันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง หาส่วนเหลือมิได้.
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, sensual pleasure